အူမကြီးစစ်ဆေးမှုဆိုတာဘာလဲ? - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အူမကြီးကင်ဆာဟာ အူမကြီးနေရာမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးထွားလာတာနဲ့ စတင်တာဖြစ်ပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကင်ဆာပြောင်းနိုင်ဖွယ်အကျိတ် လို့ခေါ်တဲ့ Polyps အကျိတ်လုံးလေးတွေဟာ ကင်ဆာအနေနဲ့ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးစစ်ဆေးမှုဆိုတာက အဆိုပါ Polyps အကျိတ်လေးတွေရှိမရှိဆိုတာကို အူမကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို Scan ဖတ်ပြီးစစ်ဆေးတာပျဲဖစ်ပါတယ်။အခုလို စစ်ဆေးတာကနေ အကောင်းဆုံး အတိကျဆုံးသော စစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းမျိုးစုံကို အသုံးပြုပြီး နာကျင်မှုမရှိစေပဲ ပြင်ဆင်ချိန်ကိုလည်း စမ်းသပ်ရန် အချိန်ခဏပဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးစစ်ဆေးမှုဟာ Polyps အများစုနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေအများစုကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပြီး အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အူမကြီးစစ်ဆေးခြင်းကို ၁၀ နှစ် ၁ကြိမ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသက် ၄၅ နှစ်အထက်၊ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ထက်ဝက်နည်းပါးလျော့ချ
Epithelium နဲ့ သွေးကြောပြွန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Polyp တွေကို ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာ အခြားသော သာမန်မဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုရှိမရှိကို သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်တုန်းကဆိုရင် ဆရာဝန်ဟာ အူမကြီးစစ်ဆေးမှုကို အဖြူရောင်မီးနဲ့ စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ နည်းစနစ်ဟာ အမြဲတမ်းတိကျသေချာတဲ့ပုံရိပ်ကို ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ အဆိုပါ ကိစ္စမှာ သွေးကြောပြွန်ထဲမှာရှိတဲ့ Epithelium တွေကို သေချာစွာမြင်ရစေဖို့အတွက် လူနာကို ဖယောင်းထိုးသွင်းခြင်းလိုမျိုး နည်းလမ်းတွေကို ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုနည်းစစနစ်ဟာလည်း စစ်ဆေးဖို့အတွက် အချိန်တစ်ခုလိုအပ်မှာပါ။အခုအချိန်မှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Sano ဆေးရုံနဲ့ပူးပေါင်းမှုအရ Samitivej ဟာ Narrow Band Imaging (NBI) International Colorectal Endoscopic Classification (NICE) with magnification ကို ဆောင်ရွက်နိုင်နေပြီဖြစ်ပြီး ယင်းဟာအူမကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ Polyps တွေကို စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ NBI ဆိုတာကတော့ အပြာရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင် အလင်းတွေကို Hemoglobin (Hb) တွေထဲမှာရှိတဲ့ အရေးပါတဲ့ မော်လီကျူးတွေအတွက် အသုံးပြုတဲ့ Imaging Resource တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်က သွေးကြောပြွန်ပုံစံတွေဟာလည်း အညိုရောင်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို Epithlium နဲ့ သွေးကြောပြွန်ပုံစံတွေကို အတိအကျတွေ့မြင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ NBI ဟာ အဆိုပါ ဓါတ်ပုံတွေကို ချဲ့ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်ဟာ သွေးကြောပြွန်တွေရဲ့ ပုံစံကို အသေးစိတ်ကြည့်ရူနိုင်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေ တစ်သျှးထဲမှာ ရှိမရှိကို သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ဆဲလ်တစ်တစ်သျှူးတွေရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို NBI ကနေ သိနိုင်တဲ့အပြင် NICE Classification ၃ မျိုးအနေနဲ့ ခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
NICE 1: NICE 1 : Polyp ရဲ့ ဆဲလ်တစ်တစ်သျှူးတွေဟာ ပုံမှန်အနေအထားမှာရှိနေပြီးတော့ ဆရာဝန်ဟာ ထပ်ဆင်စစ်ဆေးမှုတွေအတွက် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နည်းစနစ်ကို ညွန်ကြားမှာဖြစ်သလို Polyp ဆဲလ်တွေရဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်စွမ်းဟာ အလွန်နည်းပါးတဲ့အတွက် ဖယ်ရှားစရာလိုအပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
NICE 2: ဆဲလ်တစ်တစ်သျှူးတွေရဲ့ ဖြစ်တည်မှုဟာ ပင့်ကူအိမ်နဲ့ ပုံစံတူနေပြီး နောင်အနာဂတ်မှာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြနေမှာပါ။ အဆိုပါအချိန်မှာ ဆရာဝန်ကနေ အဆိုပါ Polyp ကို Coil ဒါမှမဟုတ် လျှပ်စစ်ဓားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ချက်ခြင်းဖယ်ရှားပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
NICE 3: ဆဲလ်တစ်တစ်သျှူးတွေဟာ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ပေါ်နေပြီး ကင်ဆာဆဲလ်နဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဆရာဝန်ဟာ Polyp အကြိတ်တစ်ခုလုံးကို အူမကြီးစစ်ဆေးမှုကနေ ဖယ်ရှားမှုပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပဲ တစ်သျှးရယူခြင်းကိုပဲ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှ ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ မည်သည့်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး Polyp ဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားမလဲဆိုတာကို တိုင်ပင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး NBI နည်းစနစ်တွေကို အသုံးပြုတာဟာ ပိုပြီးတိကျတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် ဆရာဝန်တွေကိုလည်း မည်သည့်ဆေးကုသနည်းနဲ့ ကုသရမလဲဆိုတာကို တိတိကျကျသိနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် NBI စနစ်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို အချင်း ၅ မီလီမီတာအထိ သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကိုတောင် သိနိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်း အခုပမာဏဟာ အန္တရာယ်များလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်မီးကိုအသုံးပြုပြီး အူမကြီးစစ်ဆေးမှုလိုပဲ အလွန်သေးငယ်တဲ့ Polyp အကျိတ်တွေကိုတော့ စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ ကျန်ခဲ့နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် NBI နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး အူမကြီးကင်ဆာကို စစ်ဆေးမှုတွေဟာ ဆရာဝန်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ကို ပိုပြီးမှီခိုနေတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ NBI စနစ်ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်တွေဟာ နည်းပါးသေးတဲ့အတွက် အများစုက NBI စနစ်ကို Scan ဖတ်တဲ့အနေနဲ့ပဲ အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း NBI က အခြားသော ဖယောင်းသွင်းပြီး စစ်ဆေးရတဲ့ Chromoednoscopy လို နည်းစနစ်မျိုးနဲ့ ယှဉ်ရင် သိသိသာသာကို စိတ်ချရနိုင်ပါသေးတယ်။
ပထမဆုံးကတော့ ခံတွင်းဆေးရည်ဖြင့် သောက်သုံးရမယ့်ခွက်ကို သေချာစွာဆေးကြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ လူနာဟာ Laxative ဆေးရည်ကို အူမကြီးစစ်ဆေးမှုအတွက် သောက်သုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တနေ့မနက်မှာ စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူနာဟာ စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်ခင် ၆ နာရီအတွင်းမှာ စားအသောက်ခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။ တနည်းအားဖြင့် လူနာဟာ Laxative ဆေးရည်ကို မနက်ပိုင်း ၂ နာရီ ၃ နာရီလောက်သောက်သုံးရမှာဖြစ်ပြီး သန့်စင်ခန်းမှာ ဝမ်းအတွင်း ၌ မည်သည့်အစာမှမကျန်ရှိအောင် ရှင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှသာ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူနိုင်မှာပါ။
နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ ဆရာဝန်ကနေ လူနာကို ထုံဆေးနဲ့ စိတ်ငြိမ်ဆေးပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် အူမကြီးထိခိုက်မှုကို လျှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆရာဝန်ဟာ အူမကြီးအခြေအနေကို အတိအကျတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ တကယ်လို့ လူနာဟာ အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်သူ (သို့) အားနည်းနေတယ်ဆိုရင် လျင်မြန်စွာခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူနာက တည်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ဟာ အူမကြီးစစ်ဆေးဖို့အတွက် Colonoscope ကို Rectum ထဲသို့ ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ အဆိုပါ Colonoscope ဟာ 1.60 မီတာ ရှည်တဲ့အတွက် ဝမ်းရဲ့ 1.50 မီတာ အရှည်ကို ကောင်းစွာဝင်ဆံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Colonscope ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်ဟာ ဝမ်းအတွင်းကို ကောင်းစွာဝင်ရောက်အောင် ၇၀ ကနေ ၈၀ စင်တီမီတာအထိ ထိန်းသွားမှာဖြစ်ပြီး အူမကြီးတစ်ခုလုံးသာမက အူသိမ်ကိုပါ စစ်ဆေးသွားမှာပါ။
အခု စစ်ဆေးမှုမှာ ၃ စင်တီမီတာထက် သေးငယ်တဲ့ Polyp ကို တွေ့ရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကနေ Colonscope နဲ့ ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ဟာ မိနစ် ၃၀ ဝန်းကျင်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Polyp တွေ ရှိနေတဲ့အပေါ်မှုတည်ပြီး အခုထက်လည်း ပိုကြာသွားနိုင်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး အူမကြီးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ကြီးမားပြီး ပုံသဏ္ဍန်ပျက်နေတဲ့ Polyps အကျိတ်တွေကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် Endoscopic Submucosal Dissection (ESD) ဟာ အသက်ဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ်စရာမလိုအပ်ပဲ ဖယ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနည်းဟာ ခွဲစိတ်တာကနေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို လျှော့ချပေးပြီးတော့ ဝမ်းဗိုက်၌အမာရွတ်မကျန်စေခြင်းနှင့်ဆေးရုံတက်ချိန်ကို လျှော့ချပေးခြင်းအားဖြင့်လူနာတွေကို လျင်မြန်စွာသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လူနာတွေအနေနဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလို နာလန်ပြန်ထူနိုင်ပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာပါ။ ESD စနစ်ဟာ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း Sano ဆေးရုံတို့ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ နည်းစနစ်ဖြစ်ပြီးတော့ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကို အဓိထားပြီး ဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အူမကြီးကင်ဆာဟာ အသက် ၅၀ နဲ့အထက် လူတွေမှာ ဖြစ်ပွားမှုများပြားတဲ့အတွက် စစ်ဆေးသင့်ပြီးတော့ အဲ့ဒါဟာ အသက် ၅၀ အောက်သူတွေမှာလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေလုံးဝမရှိဘူးလို့ ပြောကြားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အံ့ဩစရာတစ်ခုက ကင်ဆာဂျာနယ်တစ်ခုရဲ့ လေ့လာချက်အရ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားတဲ့သူ ၇ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က အသက် ၅၀ အောက်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ယေဘုယျလက်ခံထားတဲ့အသက် ၅၀ အထက်ဆိုတာထက် အသက် ၄၀ အထက်လူတွေမှာဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ https://www.samitivejhospitals.com/en/who-is-at-risk-of-colon-cancer/” >Click here to learn warning signs, symptoms and risk factors.
Reference: https://www.cancer.org/latest-news/american-cancer-society-updates-colorectal-cancer-screening-guideline.html” >Guideline for Colorectal Cancer Screening by The American Cancer Society (ACS)
ကင်ဆာသုတေသီတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူတိုင်းဟာ အမြဲတမ်းလိုလို ၁၀ နှစ်တစ်ခါ စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သင့်ပြီး ၁၀ နှစ်အကြာမှာ ပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့သူတွေရဲ့ ၆ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိပဲ ကြားကာလအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ ကင်ဆာအနေနဲ့ တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် စစ်ဆေးမှုတွေကို ၇ နှစ်တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် ၅ နှစ်တစ်ခါ ပြုလုပ်သင့်ပြီးတော့ ယခုတွေ့ရှိချက်ကို အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ဆဲပါပဲ။ အချို့သော လူနာတွေအတွက်ကတော့ ကြားကာလအတွင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အထိ စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုပဲ ၂ နှစ်မျှသာ စောင့်ဆိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ဆရာဝန်ကတော့ လူနာအခြေအနေအပေါ်ကိုမှုတည်ပြီး စစ်ဆေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အူမကြီးစစ်ဆေးမှုကို ဘယ်လိုပြုလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်မလဲ?
ပထမဆုံးအနေဖြင့် ဆရာဝန်ကို သင့်အခြေအနေကို သိရှိပြီး ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကို စုံစမ်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးစစ်ဆေးပြီးသည့်အချိန်မှာလည်း ဆေးသောက်သုံးနေမှုကို ဆရာဝန်နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ချိန်ညှိတာ (သို့) ရပ်ဆိုင်းတာကို ပြုလုပ်ရမှာပါ။
အူမကြီးစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်ဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ပြီးလျှင် သင့်အနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေကို ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သွေးကြောကျဉ်းစေတဲ့ Aspirin သို့မဟုတ် အခြားသော ဆေးဝါးတွေကို သောက်သုံးနေမှုကို တစ်ပတ်ကြိုတင်ပြီး ရပ်ဆိုင်းထားပါ။
အမျှင်ဓါတ်များပြားတဲ့ အသီးအရွက်တွေ (သို့မဟုတ်) အသီးတွေကို မစစ်ဆေးခင် ၃ ရက်အလိုမှာ စားသုံးခြင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့။
သင့်ရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာ ဘာအစာမှကျန်ရှိနေခြင်းမရှိအောင် Laxative ဆေးရည် သောက်သုံးထားပါ။ မစစ်ဆေးခင် ၁ ရက်အလိုမှာလည်း ဆရာဝန် လမ်းညွှန်သည့် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
အူမကြီးစစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ခင် ၆ နာရီနဲ့ ၈ နာရီအလိုတွင် အစားအသောက် စားသုံးခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ရပါ။
https://www.samitivejhospitals.com/en/understanding-influenza/” >Understanding Influenza (the Flu)
https://www.samitivejhospitals.com/en/understanding-shingles/” >What Is Shingles? Understanding Shingles: Causes, Complications and Treatments
https://www.samitivejhospitals.com/en/risk-of-developing-fatty-liver-disease/” >Obese children are at risk of developing fatty liver disease
https://www.samitivejhospitals.com/en/breast-cancer-screening-and-prevention/” >Breast Cancer: Screening and Prevention
https://www.samitivejhospitals.com/en/avoid-partial-paralysis/” >10 things you should know in order to avoid full or partial paralysis
https://www.samitivejhospitals.com/en/if-lung-cancer-is-identified-early-enough/” >If lung cancer is identified early enough, survival is possible
https://www.samitivejhospitals.com/en/check-your-risk-of-osteoporosis/” >Check your risk of Osteoporosis
(https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/svh-early-detection/#flu” >Samitivej Sulhumvit | https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/snh-early-detection/#flu” >Samitivej Srinakarin)
(https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/svh-early-detection/#zoster” >Samitivej Sukhumvit | https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/snh-early-detection/#zoster” >Samitivej Srinakarin)
(https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/svh-early-detection/#colonoscopy” >Samitivej Sukhumvit | https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/snh-early-detection/#colonoscopy” >Samitivej Srinakarin)
(https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/svh-early-detection/#fibroscan” >Samitivej Sukhumvit | https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/snh-early-detection/#fibroscan” >Samitivej Srinakarin)
(https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/svh-early-detection/#papsmear” >Samitivej Sukhumvit | https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/snh-early-detection/#papsmear” >Samitivej Srinakarin)
(https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/svh-early-detection/#mammogram” >Samitivej Sukhumvit | https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/snh-early-detection/#mammogram” >Samitivej Srinakarin)
(https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/svh-early-detection/#bone” >Samitivej Sukhumvit | https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/snh-early-detection/#bone” >Samitivej Srinakarin)
(https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/svh-early-detection/#stroke” >Samitivej Sukhumvit | https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/snh-early-detection/#stroke” >Samitivej Srinakarin)
(https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/svh-early-detection/#lowdose” >Samitivej Sukhumvit | https://www.samitivejhospitals.com/en/promotions/snh-early-detection/#lowdose” >Samitivej Srinakarin)